» Dhageeyso Maqalka:War deg deg ah Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud oo ka bad baaday shil Diyaaradeed….
Dhageeyso Maqalka:War deg deg ah Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud oo ka bad baaday shil Diyaaradeed….
Aug 25, 2013 - jawaab	ShareXuseen Cali Waheliye (Cirfo) oo Gudoomiayaha ay ay Dowlada Federaalka soomaliya usoo Magacwday gobalka Galgaduud ayaa kawarbixiyeey shil ku qabsaday Garoonka Diyaaradaha ee Guruceel.
Diyaaradda ayaa la sheegay in duuliyihii waday uu si khalad ah uga dajiyay garoonka, taasna ay keentay inay jidka ka baxdo uuna ku dhaawacmo hal qof oo wafdiga ka mid ahaa, kaasoo aan magaciisa la sheegin.
Mas’uuliyiinta wafdiga ayaa intooda kale bad-qaba wax dhibaato ahna aysan soo gaarin, iyagoo si nabad ah diyaaradda uga dagay, waxaana abaaduuluhu uu sheegay inay u tageen gobolkaas fulinta
Like this:Like Loading... « Warbixinta Ka HoreysayDhageeyso Maqalka: Nabadoon Axmed Diiriye oo Baaq Nabadeed u diray Beelo Ku Dagalamaya Gobolka Galgaduud…….	Warbixinta Xigto »Dhageeyso Maqalka:Arday fara badan oo gaareeysa 300 oo deeq wax barasho ka heshay dalka yamen iyo sudaan….	Leave a Reply Cancel reply